နံပါတ် (၁) ဂဏန်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အပြုအမူတွေက ဘယ်လိုရှိလဲ? - For her Myanmar
ယောင်းက နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတစ်ယောက်လား ?
လတစ်လရဲ့ ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက်နေ့တွေမှာ မွေးဖွားသူတွေကို နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၁) သမားတွေက အလွန်အကျွံ အလုပ်လုပ်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီး မာနကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရောက်အောင် သွားတတ်ပြီး ဘယ်သူဘာပြောပြောလည်း ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။
နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေက အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ နေရာတစ်ခုကို မှန်းတတ်ကြပြီး ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ တခြားသူတွေက သူတို့ကို တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားတွေလို့ မှတ်ယူသွားတတ်ကြပါတယ်။ မှီခိုတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ အဘိဓာန်မှာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ တီထွင်ကြံဆတတ်ပြီး ဘယ်ပြဿနာဖြစ်ဖြစ် မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဖြေရှာတတ်ပါသေးတယ်။
Related Article >>> (၉) ဂဏန်းပိုင်ရှင်တို့ အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေက ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားလာသူတွေပါ။ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေ တဖြည်းဖြည်း ကွဲထွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကို နှစ်သက်ပြီး အနိုင်လိုချင်တတ်ကြ သူတွေပါတဲ့။
နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေက အချစ်ရေးမှာဆိုရင် ချုပ်ချယ်တတ်ကြပြီး သူတို့စေလိုရာစေ တတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဒဏ်ကို သည်းခံပြီး ချစ်နိုင်ကြသူတွေကတော့ နံပါတ် (၃) နဲ့ (၅) ဂဏန်းသမားတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသည်းခံတဲ့ သူတွေကိုလည်း နံပါတ် (၁) သမားတွေက ငြီးငွေ့တတ်ပါသေးတယ်။
နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေက လက်အောက်ဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေပါ။ သူများချမှတ်ထားတဲ့ ဘောင်တစ်ခုထဲမှာ နေရတဲ့အခါ ကျဉ်းကျပ်တယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် အလုပ်မှာပျော်ရွှင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများလုပ်ရမယ်ဆို ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ကြိုးစားတတ်သူတွေပါ။
ကဲ … ဒါကတော့ နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေပါပဲ။ ယောင်းတို့သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ နံပါတ် (၁) ဂဏန်းသမားတွေရှိရင်လည်း မန်းရှင်းခေါ်ခဲ့ကြပါဦး။
ယောငျးက နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတဈယောကျလား ?
လတဈလရဲ့ ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရကျနတှေ့မှော မှေးဖှားသူတှကေို နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှလေို့ချေါပါတယျ။
နံပါတျ (၁) သမားတှကေ အလှနျအကြှံ အလုပျလုပျတတျသူတှဖွေဈပွီး မာနကွီးတတျကွပါတယျ။ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို မရောကျရောကျအောငျ သှားတတျပွီး ဘယျသူဘာပွောပွောလညျး ဂရုမစိုကျတတျကွပါဘူး။
နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှကေ အငျမတနျမွငျ့မားတဲ့ နရောတဈခုကို မှနျးတတျကွပွီး ဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ တခွားသူတှကေ သူတို့ကို တဈကိုယျကောငျးသမားတှလေို့ မှတျယူသှားတတျကွပါတယျ။ မှီခိုတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှရေဲ့ အဘိဓာနျမှာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ တီထှငျကွံဆတတျပွီး ဘယျပွဿနာဖွဈဖွဈ မွနျမွနျဆနျဆနျ အဖွရှောတတျပါသေးတယျ။
Related Article >>> (၉) ဂဏနျးပိုငျရှငျတို့ အကွောငျး တဈစတေ့စောငျး
နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှကေ ခေါငျးဆောငျဖွဈဖို့ မှေးဖှားလာသူတှပေါ။ သူတို့တှရေဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုကွောငျ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးကနေ တဖွညျးဖွညျး ကှဲထှကျသှားနိုငျပါတယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှုတှကေို နှဈသကျပွီး အနိုငျလိုခငျြတတျကွ သူတှပေါတဲ့။
နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှကေ အခဈြရေးမှာဆိုရငျ ခြုပျခယျြတတျကွပွီး သူတို့စလေိုရာစေ တတျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဒဏျကို သညျးခံပွီး ခဈြနိုငျကွသူတှကေတော့ နံပါတျ (၃) နဲ့ (၅) ဂဏနျးသမားတှပေါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုသညျးခံတဲ့ သူတှကေိုလညျး နံပါတျ (၁) သမားတှကေ ငွီးငှတေ့တျပါသေးတယျ။
နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှကေ လကျအောကျဝနျထမျးလုပျဖို့ အဆငျမပွတေဲ့သူတှပေါ။ သူမြားခမြှတျထားတဲ့ ဘောငျတဈခုထဲမှာ နရေတဲ့အခါ ကဉျြးကပျြတယျလို့ ခံစားရတဲ့အတှကျ အလုပျမှာပြျောရှငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးမြားလုပျရမယျဆို ထမငျးမဟေ့ငျးမကွေို့းစားတတျသူတှပေါ။
ကဲ … ဒါကတော့ နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားနဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှပေါပဲ။ ယောငျးတို့သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ နံပါတျ (၁) ဂဏနျးသမားတှရှေိရငျလညျး မနျးရှငျးချေါခဲ့ကွပါဦး။
Tags: Astrology, Brith, date, Fun, Number, numerology, self